१९६६ पछि पहिलो पटक ठुला खेलको फाइनलमा इंग्ल्यान्ड : आइतबार इटालीसँग भिड्दै - Kantipath.com
१९६६ पछि पहिलो पटक ठुला खेलको फाइनलमा इंग्ल्यान्ड : आइतबार इटालीसँग भिड्दै
डेनमार्कलाई पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । इंग्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। डेनमार्कलाई अतिरिक्त समयमा २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्ड उपाधि नजिक पुगेको हो । वेम्बली स्टेडियममा इंग्ल्यान्डले सुरुवाती एक गोलको अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो ।
इंग्ल्यान्डको जितमा कप्तान ह्यारी केनले एक गोल गरे । इंग्ल्यान्डले एक गोल आत्मघाती उपहार पाएको थियो । डेनमार्कका मिकेल डाम्सगार्डले एक गोल गरे । ३० औं मिनेटमा युवा खेलाडी डाम्सगार्डले फ्रिकिकबाट गोल गर्दै डेनमार्कलाई अग्रता दिलाएका थिए । ३९ औं मिनेटमा डेनमार्कका कप्तान सिमोनले आत्मघाती गोल गरेपछि खेल १-१ को बराबरीमा पुग्यो ।
अतिरिक्त समयको १ सय ४ औं मिनेटमा कप्तान केनले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई २-१ को जित दिलाए । इंग्ल्यान्ड सन् १९६६ पछि पहिलो पटक मुख्य प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । अब इंग्ल्यान्डले फाइनलमा इटालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । फाइनल खेल आइतबार राति वेम्बली स्टेडियममा हुनेछ ।
Previous Previous post: ओली र नेपालबीचको भेटवार्ता शुरु
Next Next post: ओलीले ‘नो’ भनेपछि उठेर हिंडे माधव नेपाल
नेइमार मैदानमै रोएपछि ..
फुटबल : नेपालले जापानको क्वान्साइ गाकुइनलाई २–१ ले हरायो
रोनाल्डिन्होको पासपोर्ट सहित करोडौको सम्पत्ति जफत !
‘युइएफए’वर्ष खेलाडी घाेषणा आज, कसले मार्ला बाजी ?
साफ यू-१८ : नेपालको अन्तिम टोली घोषणा, को-को परे टीममा ?